Izizathu ezinhlanu zokuthenga
Okunye Imisebenzi yokuzonwabisa
Uhambo lokuthenga luyakwazi ukuguqula ubomi kwintombazana. Esi sifundo esihle. Ingakumbi xa unemali. Kukho ubuncinane izizathu ezinhlanu zokuthenga. Ukuthengwa kufuneka kusebenze ngentshiseko ekuqaleni kwexesha lefestile. Kwaye kwimeko elandelayo.
Isizathu sokuqala sokuthenga ngothando. Izibalo zifumene ukuba kwiinyanga ezintathu zokuqala zobudlelwane, abathandi bazo zonke iintlobo zentengiso bachithe ihafu yengeniso yabo kwiivenkile. Abakhuthazwa nje kuphela ngumnqweno wabo oqhubekayo wokubukeka ngcono. Kanti ke inkolelo engapheliyo yokuba ukuvakalelwa kwintswelo kufuna ukubonakala kwakhona. Izitoko endaweni ye-pantyhose, i-cocktail yokugqoka iingubo, iingubo ezingaphantsi kweengubo zangaphantsi kunye namacici amacwecwe ukufanisa ubuso obukhanyayo. Nangona kubonakala ukuba abantu abanothando abanokwenene bayabuyela kwimvelaphi, kwaye kunye nayo ukukwazi ukuvavanya imali ngemali - musa ukuzikhawulela. Xa uthanda, uthando lwakho lujoliswe kuwe. Unyaka kamva wathengwa ngeli xesha, izinto zinokwenzeka, zibonakala zingenakwenzeka kwaye zingenasidingo. Kodwa baya kuphinda babuyisele kwakhona kwixesha apho wawukho kakhulu, uvuyo kakhulu.
Ngaphambi kokulwa nomdlali.
Isizathu sesibini sokuya kuthengwa ngabafazi. Ngokomgaqo, nayiphi na uhambo lokuthengwa, ngandlela-thile, ukuphikisana, i-duel yezinto ezithandayo kunye namathuba. Kodwa ukubonakala kwakho kubaluleke kakhulu xa uya kwiqela. Ngokukodwa ukuba kukho intombazana entsha yeqabane lakho langaphambili. Okanye, ngokuchaseneyo, intombi yangaphambili-kwaye kufuneka ufusele zombini. Kule meko, akufuneki ukuba ucinge ngemali. Emva kwakho konke, ukunqoba kubalulekile kuwe nayiphi na indleko! Isixhobo sakho esibalulekileyo kule meko siya kuba nethemba elingathembekanga kuwe. Kwaye le nto ungayithengela kwaye ugqoke kunye neyona nto ingakhululekile, kodwa iingubo ze-otpadny. Kunengqiqo ukutyalomali kwi-professional-making and hair styling evela kwintonga enhle.
Ngobusuku kunzima usuku.
Isizathu sesithathu sokuhamba sithengela imini embi. Impahla yendlu okanye iimveliso kwiimvakalelo eziphazamisayo, njengomthetho, musa ukuhamba. Kulo rhu lumente, baya kuma-boutiques, apho kukuhle, kuncinci, kwaye unokuthenga into ethile. Enyanisweni, ngoku awunakhathaleli okokuthenga ngokuthe ngqo. Into eyona nto kukukhupha iimvakalelo eziphazamisayo. Ngako oko, akukho nto inokuyenza xa kuthengwa. Khetha into entle, kodwa engabizi kakhulu. Umzekelo, amanzi angasese okanye i-nail polish. Kule meko, i-algorithm elula isebenzayo: into ethengiweyo-ingqwalasela iyatshintshwa - uxinzelelo lususwa. Ngokuqhelekileyo, ukuba udabukile, uye kwivenkile yefrikanti ye-balm for the shower and for the soul. Olunye uhlobo oluthile lonyango lukuthengwa kwezicathulo. Emva koko, ukuthengwa kwezicathulo kunokunandipha. Ngokuqhelekileyo ikhowudi yokugqoka iofisi idinga iingubo eziqinileyo, kwaye ufuna into ekhanyayo. Kule meko, izicathulo ezibomvu ze-lacquer ziyakwazi ukuvuselela ijacket emhlophe kunye neengubo.
Emva komthendeleko ocolileyo.
Isihlandlo sesine sokuya kuthengisa iholide edlulileyo. Esikhundleni sosuku lonke elele embhedeni eneentloko, cwangcisa iseshoni yonyango. Emva koko, iinzuzo kunye nokuzonwabisa kwintengiso zingatholakala ngaphandle kokuthenga nantoni na. Ngamanye amaxesha kunelungelo lokuzama nje ukulungelelanisa. Yiya kwisitoreji kwaye ujonge izinto zokubuyisa kunye nemibala yokuthoba: eluhlaza, obomvu, obomvu. Wena ngokwakho ngeke uqaphele ukuba uza kuthwala njani iingubo ezinemibala ebomvu, iingubo ezimvu ebomvu, iingubo ezimnyama eziphuziweyo kunye ne-pantyhose yazo yonke imibala yobuninzi. Ukuba awukuthandi ukuthenga ngokuzenzekelayo esitolo okanye ungaqiniseki ngokungahambi kakuhle kwakho, ke ungathathi imali eninzi nawe. Khumbula ukuba unako ukubuyela kwizinto eziqhelekileyo zokugqoka. Kodwa ungazami ukutshintsha ukubonakala kwakho ngokuphawulekayo. Akudingeki ube yinye - kwanele ukuba ube nguyena mzekelo. Thenga into eza kugxininisa ubuchule bakho obuphambili. Ngaba unamahlombe amahle? Zama kwisidlo se-bustier. Iinqumlo zeenyawo? Fumana izicathulo ezihlakaniphile kunye nomgca omncinci kunye ne-fucky buckle.
Xa uhlala eholide kwelinye ilizwe.
Isizathu sesihlanu sokuhamba sithenga njengeholide ephesheya. Nabani na ophumle kwisixeko sendawo yokuhlala, wayehlala ethenga isikhumbuzo esivela kwii-seashell kwivenkile yonxweme. Okanye ii-postcards ezibonisa ukhenketho lwendawo. I-tourist-fever-fever isifikelele kwiivenkile zorhwebo zamahhala kwisiqithi-moya kwaye ayisishiyi size sibuyele ekhaya. Umntu ophumlayo uhlaziywa ngokukhululeka-ngoko ke ukuzimisela kwakhe ukufumana izinto ezingabalulekanga kakhulu kwezoqoqosho. Nangona kunjalo, akukho nto iphosakeleyo ngokuthenga i-trinkets. Nangona kunjalo: ezi zikhumbuzo ziyakukukhumbuza iintsuku ezingenakukhathazeka zeeholide. Ukuze ungathengi kakhulu, misela nje isixa ozimisele ukuchitha kwizinto ezinjalo. Kwaye wenze uluhlu lwabahlobo kunye nabaqhelana nabo abafuna ukuzisa izipho.
Imincintiswano emihle yoNyaka omtsha kubantu abadala kunye nezingane
Ngubani oza kuphumelela i-Eurovision 2017: ababhuki bemibono kunye neengqondo namhlanje
Indlela yokwenza ihookah ekhaya?
Imikhosi yaseNarnia: iNkosana yamaCaspian
Ikhaya lam dinosaur
Ukubhiyozela ukuzalwa kwesi-17 kwintombazana?
Ngaba kuyafanelekela kumhlobo othandekayo?
Kissel wezempilo kunye nobuhle
Uthe ukumkani wetheyibhile yokutya i-goose ehlanjwe ngelayisi kunye namaapulo
Iyiphi iholide yeholide ngo-Oktobha 14, 2016? Imiqondiso, imithandazo, vuyisana. Yintoni enokuyenza kwaye ayikwazi ukuyenza kwiKhuselo leNgcwelekazi?
Unokukunceda njani ngokulila nokuhlaziya
Thenga isihlalo sokusondeza umntwana
Isondlo njengenxalenye yendlela yokuphila enempilo
IHoroscope yeKrisimesi 2014
Ukuphuhliswa komntwana kwinyanga yesibini yobomi
Ukunyamekelwa kwesikhumba ekhaya
Isaladi kunye neentonga ze-crab
Ndingayenza njani ukuze loo mntu owayengumfana elele emva kwe ntombazana
Indlela yokuhlobisa itheyibhile yoNyaka omtsha we-2017 Fire Cock ngezandla zakho: iifoto ezingama-38 - Indlela yokuhlobisa i-salads, i-appetizers, ishushu kunye ne-dessert
Umdlali we-comedies uVince Vaughn
I-Casserole kwi-oven microwave
Iingubo ezimnandi kakhulu zomtshato
Inyaniso enomdla malunga nokujikeleza kwegazi kunye nenkqubo ye-venous